राजा वीरेन्द्रलाई यसरी ‘कन्भिन्स’ गराइयो जेलभित्र रहेका विपीको उपचार गर्न | karnalikhabar.com
राजा वीरेन्द्रलाई यसरी ‘कन्भिन्स’ गराइयो जेलभित्र रहेका विपीको उपचार गर्न – karnalikhabar.com
राजा वीरेन्द्रलाई यसरी ‘कन्भिन्स’ गराइयो जेलभित्र रहेका विपीको उपचार गर्न
प्रकाशित मिति :2016-12-24 10:47:13 २०३४ साल जेठको तेस्रो हप्ताको एक दिन तत्कालिन वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट विपी कोइरालाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जानु भनी मलाई फोन आयो र मैले पनि हुन्छ भनें । भोलिपल्ट दिनको १२ बजेतिर मलाई लिन मानिस आए अनि म त्यसबेला विपीलाई हिरासतमा राखेको ठाउँ प्रहरी तालिम केन्द्र महाराजगञ्ज पुगें ।
त्यहाँ पुग्दा मलाई थाहा भयो कि विपीले नै मलाई बोलाउँनु भएको रहेछ । आफ्नो मुटु धड्कँदा बीच–बीचमा रोकिने भएकाले मुटुको रोग लागेको आशंका विपीलाई भएको रहेछ । मुटुको चाल परीक्षण गर्दा मलाई विपीको मुटुमा खास समस्या भएको लागेन । आफ्नो अनुभवका आधारमा राम्रोसंग जाँच गर्दा उहाँको शीरमा रक्तसञ्चार गर्ने क्यारोटिङ आर्टरी ब्लक भएको पाएँ । त्यो धमनी ब्लक भएपछि कुनै पनि बेला पक्षाघात हुन सक्छ । राजाको हिरासतमा भएको उहाँलाई मैले तत्काल गर्न सक्ने केही पनि थिएन । त्यसैले उहाँलाई ‘केही रोग छैन’ भन्ने ढाढस दिएर दिनको एक चक्की एस्पिरिन सिफारिस गरिदिएँ ।
एस्पिरिन मामुली दबाई भएपनि हृदयाघात सुरु भएको आधा घण्टाभित्र खाएमा त्यसले २५ प्रतिशत रक्षा गर्न सक्छ । तर उहाँको धमनी अवरोधको समस्यालाई औषधिले मात्र ठीक पार्न नसकिने र अपरेशन नै गर्नुपर्र्ने समस्या हो भन्ने मलाई लाग्यो । तर अपरेशन गर्नका लागि उहाँ जेलबाट छुट्नु जरुरी थियो । तर जेलबाट तत्काल छुटी हाल्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले उहाँलाई खासै केही भएको छैन, भोलि फेरि आउँला भनी म घर फर्कें ।
घर आएपछि मेरो मनका कुरा खेल्यो । अब के गर्ने, उहाँलाई कसरी छुटाउने समस्या प¥यो । त्यसबेला उहाँका विरुद्ध पञ्चायतका कट्टरपन्थीहरु थुप्रै लागेका थिए । म एक्लैले मात्र विपीलाई हेरेमा मलाई जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने लागेर र म मैले अन्य केही डाक्टर मित्रसंग त्यस विषयमा कुरा गरें । त्यसपछि तेस्रो दिनमा डा दिनेशनाथ गंगोल, डा विष्णुप्रसाद शर्मा, डा. लक्ष्मीनारायण प्रसादसमेत चार जना भई हेर्न जान्छौं भनी अञ्चलाधीशलाई भनें ।
अञ्चलाधीशले ‘माथि सोधेर भन्छु’ भन्नुभयो र त्यस विषयमा सकारात्ममक आदेश आयो । त्यसअघि नै मैले विपीको रोगको यथार्थ लेखी यस्तो गम्भीर समस्या छ यसलाई ठाउँमा पु¥याइदिनुप¥यो भनी अञ्चलाधीशलाई रिपोर्ट बुझाएको थिएँ । मैले बुझाएको रिपोर्टको एक प्रति नक्कल अञ्चलाधीशलाई सही गराएर मैले पनि राखें । साधारणत ः आफूले बुझाएको रिपोर्टको नक्कल सरकारी कर्मचारीले लिन पाइदैनथ्यो । तर महत्वपूर्ण राजबन्दीको स्वास्थ्य सबंन्धी रिपोर्ट भएकाले मैले नक्कल मागें र तत्कालिन अञ्चलाधीशले पनि आनाकानी नगरी दिनुभयो । त्यसबेला बागमती अञ्चलको अञ्चलाधीश सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो ।
हामी चारजना डाक्टरहरुले विपीको परीक्षण गरेपछि फेरि अर्को रिपोर्ट बनाएर तुरुन्तै आवश्यक उपचार गरेन भने जे पनि हुन सक्छ भनी मैले पहिलो रिपोर्टमा लेखेको कुरा दोहो¥याएर अञ्चलाधीशकहाँ गयौं र माथि पु¥याईदिनुहोस् भन्यौं । उहाँले पु¥याइदिने कुरा गर्नुभयो र हामीले त्यसको रिपोर्ट पनि एकप्रति नक्कल राख्यौं ।
त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री डा. तुल्सी गिरीले बोलाउनुभयो । त्यसबेला उहाँले मतिर हेरेर भन्नुभयो, ‘एकबाट दुई, अनि दुईबाट चार बनाइसक्नुभयो होइन, भन्नुस् उपचारका लागि कहाँ पठाउँनुप¥यो ? जसलोक अस्पताल ?’ त्यसबेला भारतका चर्चित समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण बिरामी भई जसलोक अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो । विपी र जयप्रकाश नारायणको घनिष्ठ सम्बन्ध भएको सबैलाई थाहा भएकाले प्रधानमन्त्रीले ममाथि राजनीतिक आरोप लगाउने मनसायले त्यस्तो व्यंग कस्नुभएको जस्तो मलाई लाग्यो । त मैले पनि केही नजानेजस्तो गरी भनें, होइन, न्यूरोलोजीका लाग त जसलोकभन्दा त भेलोर नै राम्रो होला ।
दिनहरु बित्दै गए तर हाम्रो रिपोर्टको संबन्धमा केही कारवाही अगाडि बढेन । म चाहि रोजै बिरामी हेर्न जान्थें । तर मैले गर्न सक्ने भनेको एस्पिरिन दिने, खासै समस्या छैन भनी ढाढस दिने र खुशी पार्ने मात्रै थियो । म बिपीलाई कस्तो छ भनी सोध्थें र उहाँले ठीक छु त्यही एस्पिरिन मात्र खाने त हो नि होइन डाक्टरसाब् भन्नुहुन्थ्यो । उहाँ आफ्नो रोगबारे अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो । भित्रजस्तै पीडा भएर पनि हँसिलो अनुहार लिएर म फर्कन्थें ।
एकदिन हामी चारै जनालाई त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री डा. तुल्सी गिरीले बोलाउनुभयो । त्यसबेला उहाँले मतिर हेरेर भन्नुभयो, ‘एकबाट दुई, अनि दुईबाट चार बनाइसक्नुभयो होइन, भन्नुस् उपचारका लागि कहाँ पठाउँनुप¥यो ? जसलोक अस्पताल ?’
त्यसबेला भारतका चर्चित समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण बिरामी भई जसलोक अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो । विपी र जयप्रकाश नारायणको घनिष्ठ सम्बन्ध भएको सबैलाई थाहा भएकाले प्रधानमन्त्रीले ममाथि राजनीतिक आरोप लगाउने मनसायले त्यस्तो व्यंग कस्नुभएको जस्तो मलाई लाग्यो । त मैले पनि केही नजानेजस्तो गरी भनें, होइन, न्यूरोलोजीका लाग त जसलोकभन्दा त भेलोर नै राम्रो होला ।
मलाई ठूलो पदमा बसेको मानिसले राजनीति गरेको दोष लगाएकाले घरमा आएपछि छटपटी भयो । अब भने साधारण बाटोबाट काम हुँदैंन भन्ने लाग्यो र तत्कालिन राजा वीरेन्द्रसंग भेट्ने निधो गरें । राजालाई भेट्नका लागि पहिला राजाका सचिवकहाँ जाने निधो गरें । सचिव चिरन थापाकहाँ भन्न लगाएँ । अर्का प्रभावशाली सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठकहाँ आफैं गए ।
भेटमा उहाँले भन्नुभयो– ‘यो कुरा के हो डाक्टरसाब् ? एक–दुई दिन त पर्खनुहोस् न, कुरा हुँदैं छ नि । डाक्टरै प्रधानमन्त्री भएका बेला तपाईंले किन यति जोड गर्नुभएको ?’
मैले भने, ‘उहाँ डाक्टर भएपनि हेर्ने डाक्टर त म हुँ नि । मेरो पनि त जिम्मेवारी छ । तपाईंले जसरी भएपनि मलाई राजासंग भेटाइदिनुहोस् । म राजासंगै बिन्ती चढाउँछु । म राजाकै पनि उपचार गरेको मान्छे हुँ नि, मैले राजालाई किन भेट्न नपाउँने ?’
त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो– ‘हेर्नुहोस्, तपार्ईंको मेडिकल रिपोर्ट र सिआइडी रिपोर्ट पढद त बहुलाइन्छ ।’
राजा वीरेन्द्रले कौतहुलतापूर्वक मसंग सोध्नुभयो– ‘होइन ए डाक्टर तिमीसंग आधुनिक साधन नै नभईकन विपीलाई यति कडा रोग छ भनी लेखेछौं, त्यही एउटा स्टेथेस्कोपका भरमा यति कडा रोग छ भनेर कसरी थाहा पायौं ?’
त्यसबेला सिआइडी रिपोर्टमा ‘डा. मृगेन्द्रराज पाण्डे विपीको कोठामा पुगेर बिछ्यौनामा बस्यो, सान्दाई भन्यो’ आदि लेख्ने रहेछन् । नारायणप्रसादजीले ‘केही समय पर्खनुहोस्, समय लिनुहोस्’ भन्नुभयो । समय लिने भन्दाभन्दै केही भइदियो भने मलाई त ठुलो आत्मग्लानी हुन्छ भन्ने लागेर केही न केही गर्नै प¥यो भन्नेतर्फ लागें । त्यतिखेर अलि गाईंगुईं चलिसकेको थियो । अनि म राजाका अर्का सचिव रन्जनराज खनालकहाँ गएँ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘हेर्नुहोस् डाक्टरसाब, यो करा पुग्न त पुगिसकेको होला, मलाई यसविषयमा त्यति थाहा भएन, तैपनि म एकपटक कोशिस गर्छु, तपाईं भोलि घरमै बस्नुहोस्, मैले कुरा मिलाउन सकें भने तपाईंलाई बोलाउँला ।’
म बिहानैदेखि घरमै बसिरहें । केही खबर आएन । अनि विपीलाई हेरेर फर्कें र घरमै बसिरहें । साँझ ५ बजेतिर अकस्मात फोन आयो । रन्जनराजजीले भन्नुभयो, ‘डाक्टरसाब तुरुन्त पश्चिम ढोकामा आउनुहोस् ।’
म पनि तुरुन्तै पश्चिम ढोकामा पुगें । त्यहाँ रन्जनराजजीसंग भेट भयो र उहाँले मलाई राजा वीरेन्द्र भेट्ने कोठामा लगेर राख्नुभयो । एकछिनपछि राजाले बोलाउनुभयो भनी भित्र लगियो ।
मैले उहाँका जिजुमुमा, राजा त्रिभुवनकी रानीको पनि त्यस्तै किसिमका विशेष समस्या पत्ता लगाएर डायग्नोसिस गरेको कुरा उहाँलाई स्मरण गराएँ र भनें, ‘त्यसैले मलाई विश्वास गरिबक्सियोस्, मेरो त्यही धारणा छ, विपीको रोग धेरै नै कडा छ, चूप लागेर बस्ने बेला छैन ।’
त्यसपछि राजाबाट सोधनी भयो, ‘तिमी कति प्रतिशत निश्चित छौं ।’
मैले भने, ‘९८ प्रतिशत ।’
अन्य धेरै सवाल पनि राजाले गर्नुभयो । राजासंगको भेट एक किमिसले प्रश्न उत्तरको जाँचजस्तै भयो ।
‘यो कुनै कडा रोग होइन, डा. मृगेन्द्रराज पाण्डेले विपीलाई हिरासतबाट छुटाउन जालसाजी गरेको र यसमा आत्तिनुपर्ने कुरा नभएको’ भनी राजालाई भ्रममा पारेको जस्तो लाग्यो । राजालाई रोगको गम्भीरताबारे सम्झाउन मलाई एक घण्टा लाग्यो । अन्तमा उहाँलाई चित्त बुझेजस्तो लाग्यो र एडिसिलाई बोलाएर विपीलाई लिएर आउ भन्नुभयो ।
र मलाई नजिकको कोठामा गएर बस भन्नुभयो । अनि म त्यता गएर बसें ।
करिब एक घण्टापछि वीपी आइपुग्नुभयो र मलाई त्यहाँ देखेर छक्क पर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘ए डाक्टरसाब पनि यहाँ ?’ उहाँ राजनीतिक मानिस भएकाले राजाले राजनीतिक कुरा गर्न बोलाएको होला भनी ठान्नुभएको होला भन्ने लाग्यो ।
उहाँलाई हामीले त्यस्तो कडा रोग लागेको छ भन्ने कुनै शंका गर्ने ठाउँ दिएका थिएनौं । डाक्टरको धर्म के हो भने उपचार गराउन नसके पनि कम्त्ीमा बिरामीलाई शंकामा राखेर बेचैन गराउँनु हुन्न । सुन्दरीजल जेलमा रहँदा उहाँ त्यसरी बेचैन भएको पनि मैले देखेको छु ।
राजाले मलाई वीपीलाई प्रष्टसंग रोगबारे जानकारी दिन भन्नुभयो र मैले जानकारी दिएँ र भने, ‘तुरुन्त उपचार हुन सकेन भने जे पनि हुन सक्छ ।’ मैले त्यसो भन्दा पनि बिपीको अनुहारमा कुनै परिवर्तन आएन । मैले आफ्नो भनिसकेपछि राजाले मलाई बाहिर जान भन्नुभयो ।
बिपी राजा भएको ठाउँमा गएको एकछिनपछि मलाई पनि राजाले भित्र बोलाउँनुभयो । त्यस विषयमा विपीको टेप रेकर्डअुनसार पुनर्जागरण मासिक, अंक ५ मा उहाँले यसो भन्नुभएको छ , ‘म त राजाले राजनीतिक कुरा गर्न बोलाएको भनी ठानेको त तिमीलाई राजनीतिक कुरा गर्न होइन, मैले तिम्रो स्वास्थ्यको कुरा गर्न बोलाएको हो भनी राजाबाट हुकुम भयो, तिम्रो स्वास्थ्य तिमीले सोचेभन्दा खराब छ ।’
त्यसपछि राजा र विपीबीच करिब एक घण्टाजति कुरा भयो । पुनर्जागरणमा प्रकाशित भएअनुसार विपीले त्यसबेला राजालाई भन्नुभएको रहेछ, ‘सरकार, मेरो स्वास्थ्यभन्दा देशको स्वास्थ्य निकै खराब रहेछ । देशको राजनीति मुख्य समस्या हो । मेरो व्यक्तिगत स्वास्थ्यका कारणले त्यो गम्भीर समयालाई पर सार्नु उचित नहोला ।’ त्यसपछि विपी निस्कनुभयो र मलाई ‘डाक्टरसाब धन्यवाद’ मेरो उपचारका लागि कहाँ, के मिलाउँनुपर्छ, मिलाईदिनुहोस् भनेर जानुभयो । अनि राजाबाट मलाई भित्र बोलाउनुभयो र केही समय कुरा भयो ।
त्यस कुराकानीका क्रममा मैले भनें– ‘सरकार अहिले वीपीलाई थुनामा राख्दा केही भयो भने उनको लासले सराकारलाई सिद्ध्याउन सक्छ भने उपचार गरिदिएमा अनुग्रहित भएर सधैं मिलेर बस्न सक्छन् । उनी राष्ट्रिय मेलमिलापमा लागिरहेको हुँदा यस्तो मौका फेरि आउदैंन ।’
त्यसपछि राजाले भन्नुभयो, ‘विपीलाई उपचार गर्न बाहिर पठाइदेउ ।’
मैले सोधें, ‘कहाँ पठाइदिने ।’
राजाले भन्नुभयो– ‘लेट हिम हायभ द बेस्ट ।’
त्यसपछि अमेरिका पठाउने निधो भयो । राति १० बजेतिर सचिवहरुलाई बोलाइयो र सबै कुरा निधो भएपछि राति १२ बजेतिर प्रधानमन्त्रीलाई पनि खबर गरिदिन भन्नुभयो । त्यसरी राजा वीरेन्द्र आफू पक्का भएपछि अरुको कुरा नसुनी आफैंले निर्णय गर्नुभएको जस्तो लाग्यो ।
भोलिपल्ट मलाई फेरि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभयो र भन्नुभयो, ‘डाक्टरसाब अमेरिका गएर यो रोग तपाईंले भनेजस्तो गम्भीर देखिएन भने तपाईं त विपीको ठाउँमा पुग्नुहुन्छ नि बुझ्नुभयो ?’
मैले पनि हाँसेर भनें, ‘ए बाबा हेर्नुस्, तपाईं पनि डाक्टर, म पनि डाक्टर, रोग पक्का गम्भीर छ । कति गम्भीर छ, के छ भन्ने कुरा त ठ्याक्कै कसरी भन्नु ? अब विपीको ठाउँमा पु¥याउँने भनेर मलाई जेलमा राख्ने भन्नुभएको होला । जेल जाँदैमा म विपीकोठाउँमा पुग्दिनँ । तपाईं पनि विपीको ठाँउमा पुग्न सक्नुहुन्न । त्यो कुरा इतिहासले मात्र बताउँछ ।’
म पनि अलि खरै मान्छे तै पनि अलिकति ढुकढुकी त लाग्यो । विपी पनि उपचारका लागि अमेरिका जानुभयो । त्यसको केही दिनपछि राजाका सचिव चिरन थापाले मलाई बोलाएर भन्नुभयो–
‘डाक्टरसाब तपाईंले बेलैमा भनिदिनुभएछ, ल हेर्नुस्, अमेरिकाका लागि शाही नेपाल राजदूत पदमबहादुर खत्रीले पठाएको रिपोर्ट ।’
विपी फर्केको केही दिनमै राजा वीरेन्द्रलाई आराम भएन । हामी डाक्टरहरुले राजालाई जाँचेर बाहिर बसिरहेका बेला त्यसबेलाका दुई जना प्रभावशाली व्यक्तिहरुले मलाई भने, ‘राजालाई बिरामी पार्ने तपाईं त हो नि, गोली ठोकेर मार्नुपर्ने मान्छेलाई रोगले मर्न लागेको बेलामा उपचार गराएर बचाउनुभयो, राजालाई बिन्ती चढाएर छुटाउनुभयो ।’
उहाँले मलाई सबे रिपोर्ट देखाउँनुभयो । त्यसमा केही दिन ढिला भए प्यारालाइसिस पनि हुनसक्ने कुरा लेखिएको थियो । त्यो रिपोर्ट हेरेपछिमात्र म राम्रोसंग सुत्न सकें । त्यसरी विपीको पहिलो रोग निदान भएदेखि त्यति नहुन्जेलसम्म सबै कुरा मिलाउन लागेको झण्डै १० दिन मलाई निकै छटपटी भयो र धम्कीहरु पनि आए । अमेरिकामा विपीको अपरेशन भयो र केहीसमयम्म उहाँ त्यही नै बसेर फर्कनुभयो ।
कतै कट्टरपन्थीहरुले राजा वीरेन्द्रको मनमा पनि त्यसबेला त्यस्तै पार्ने काम भयो कि ?
-डा. पाण्डेको ‘समाजसेवाको यात्रा’ पुस्तकबाट